Isitya sokuhlambela, i-Bathroom Shower, i-Kitchen Faucet, i-Solar Shower-i-Kangrun
I-Wenzhou Kangrun Sanitary Wares Co., Ltd. yasekwa ngo-2008. Emva kweminyaka eli-13 yophuhliso, iye yaphuhliswa yabangumnikezeli ngobuchule wempahla yococeko kunye neemveliso zeshawari zangaphandle. Kuzibophezele ekuboneleleni ngesisombululo sobungcali kunye nesakho sentengiso kunye neemveliso zangaphandle zokuzonwabisa kubaxumi behlabathi.
Emva kweminyaka engaphezu kweshumi yophuhliso oluqhubekayo kunye nezinto ezintsha, i-Kangrun Sanitary Wares iye yaba ngumkhokeli ophambili nowaziwayo kwihlabathi jikelele
Uvavanyo lokuvuza kwamanzi oluyi-100%, olunemithombo yobonelelo esemgangathweni ophezulu, i-100% yokujonga umphezulu.
QALA I-DEIN ABENTEUER
Ukwenza imibala ukujikajika ...
Umba Ukupakisha 40'HQ Ubungakanani bebhokisi engaphandle (cm) KR-11 Ibhokisi yebhokisi 900 7.5 6.0 1.00 113.50 40.00 16.50 Ishawa yangaphandle ngokungafaniyo neshawari yangaphakathi, ishawa yelanga yangaphandle inokufakwa ngokulula ngaphandle kokudiliza udonga kunye nokomba. Ingasetyenziselwa kwiigadi, iilwandle kunye namachibi. Emva kokubhukuda, abasebenzisi abanakuphinda baye kwigumbi lokuhlambela ukuze bahlambe kodwa basebenzise amanzi ashushu kule ishawa ngokuthe ngqo ukuhlamba ukungcola okuseleyo kwimizimba yabo. Kulula ukudibanisa le sho ...
Umba Ukupakisha 40'HQ Ubungakanani bebhokisi engaphandle (cm) KR-15 Ibhokisi yebhokisi 990 7.5 6.0 1.00 116.00 28.00 21.00 Ishawari yangaphandle yelanga Imisebenzi emininzi yedama kunye nemisebenzi yaselwandle ikhokelele ekuveleni kwekholamu yeshawari yelanga. Ingasetyenziselwa kwizitiya, iilwandle kunye namachibi. Emva kokuqubha, abasebenzisi banokusebenzisa amanzi afudumeleyo kule ishawa ukuhlamba ukungcola okuseleyo kwimizimba yabo. Easy ukuba babuthane Ngokungafaniyo neshawa yangaphakathi, ishawa yelanga yangaphandle ingafakwa ngokulula kwi ...
Iimodeli ezahlukeneyo zifutshane ...
Ukupakisha 40'HQ Ubunzima bebhokisi engaphandle (cm) ibhokisi yebhokisi 990 6.0 5.0 1.00 114.00 24.00 21.00 Kulula ukudibanisa Ikholamu yethu yeshawari ubukhulu becala yenziwe ngamacandelo amabini. Kufuneka wenze ujikelezo olulula kunye nokudibana ngokwemiyalelo yethu ukudibanisa la macandelo mabini. Ukongeza, kukho izinto ezincedisayo ezincinci ezifuna kuphela imisebenzi elula. Ngokophando lwethu, yonke imisebenzi inokugqitywa ngumntu omnye. Yangaphandle ishawa yelanga Diff ...
Ukuthengisa kakhulu isikwere ca ...
Ukupakisha 40'HQ Ubunzima bebhokisi engaphandle (cm) Ibhokisi yebhokisi 650 11.0 10.0 1.00 113.50 42.00 22.00 Ishawa yangaphandle xa sidlala ngaphandle, kufuneka sizicoce. Nangona kunjalo, izixhobo zokuhlamba zendabuko zingafakwa kuphela ngaphakathi, ezingenako ukuhlangabezana neemfuno zokuhlamba ngaphandle. Ikholamu yethu yokuhlamba yenza le mfuno. Ingasetyenziselwa kwizitiya kunye neelwandle. Emva kokuqubha, abasebenzisi banokusebenzisa amanzi afudumeleyo kule ishawa ukuhlamba ukungcola okuseleyo kwimizimba yabo. ...